छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?... - Ek Jamarko
Home / समाज / छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?...
छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?
हुन त अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चर्चित यो घटनाबारे केही संशय नभएको हैन नै। दैलेखमा कुन सर्प पाइन्छ? सर्पले सम्झिसम्झी आएर टोकिरहन्छ? किन पहिलो टोकाइपछि किशोरी दोस्रो टोकाइलाई पर्खिइन्? कुन सर्पको कस्तोखालको बिषले ती किशोरीको ज्यान गयो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आयो? वा यो ‘सर्प’ घटनामा ‘सनसनी’ फैलाउन त्यसै आइपुग्यो?
एकबर्षअघि सम्म छापामा आउने खबरहरू प्राय ‘फलानो गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो’ भन्ने किसिमका हुन्थे। धमाधम छाउगोठहरू भत्किएका खबरहरूले यो कूप्रथा लोप हुन लागेको भान दिन्थे। अनि सायद गैह्रसरकारी संस्थाहरूसंग बजेटको अभाव भयो। सरकार त पहिला पनि सुतेकै थियो, यसपालि पनि सुती नै रह्यो। परिणामः पछिल्ला एकबर्षदेखि छाउगोठ बढेका खबरहरूमात्र सुन्न थालियो। केहीदिन अगाडि यस्तै खबर पढियो, ‘फर्किए एनजिओ, ब्युँतिए छाउगोठ’। भनेपछि करोडौँ खर्च गरेर भत्काइएका छाउगोठहरू दाताबाट रकम नआएकाले फेरी बन्न थाले। कूप्रथा जित्यो, सामाजिक अभियान हार्‍यो। यदि विदेशबाट अनवरत दान आइरहेको भए पक्कै पनि पश्चिम नेपालमा कुनै महिलाले महिनाको ५ दिन एकलासको कटेरोमा संसारबाट अपहेलित भएर बस्‍नुपर्दैन थियो होला। अझ सामाजिक वहिष्करण, खुला शौच र अवान्छनिय शोषणहरूको शिकार बन्ने पाटो र त्यसले ल्याएको मानसिक त्रास त छँदैछ। सुत्केरी हुँदासमेत नवजात शिशुसहित छाउगोठमा बसाउनुमा देखिने बर्बर मानसिकताको कुरै छाडौँ।
तर यसको अर्को पाटो त्यति राम्रो छैन। कमसेकम मजस्ता ‘नेपाली’ हौँ भन्नेलाई त। अमेरिकी गैह्रसरकारी संस्थाले मसमेतलाई बर्षमा दशबाह्रपटक इमेल पठाउँछ। नेपालमा दुईवटा अस्पतालमा मुटुको अपरेसन गर्न सहयोग चाहियो भन्दै फण्ड रेजिङ क्याम्पेनको अनुरोध हुन्छ। हाँसिरहेको नेपाली यूवाको फोटाका छेउमा एउटा लाम्चो र पारदर्शी भाँडोको चित्र छ। अनि त्यहाँ छ, यति प्रतिशत दान उठिसक्यो है भन्ने जनाउ। हामी नेपालमा तिनै अस्पतालमा समेत सरकारी राहत कार्यक्रममार्फत निशुल्क हुने अपरेसनमा ‘विदेशी ल्याएर’ बर्षको करोडौँ ‘दान’ लिन्छौँ। हामीलाई दान लिन अलिकति पनि हिचकिचाहट हुन्न। हुन त त्यसरी विदेशी आउँदा हामीलाई यो यो फाइदा भयो भन्न नसकिने हैन, तर फाइदाको अनुपातमा इज्जत कति गुम्यो भन्ने पनि त हिसाब होला नि? (अब सरकार नै मगन्ते हुने देशमा जनता वा केही समूहले पनि हात फैलाउन नपाउनु भन्ने प्रतिप्रश्नको मसंग चैँ जवाफ छैन है।)
हाम्रो इतिहासअनुसार चन्द्र शमसेरले दासप्रथा र सतिप्रथा हटाए। हुन त चन्द्र शमसेर जनताका बारेमा सोच्दथे र यो प्रथा हटाए भन्नेमा म रतिभर विश्वास गर्दिन। बेलायती उपनिवेश भारतमा विक्रम संवत १९१८ तिरै कानूनीरुपमा सति र दासप्रथा निषेध गरिएपछि बेलायतीको निरन्तर दबावले नेपालमा त्यसको साठी बर्षपछि मात्रै पहिला सतिप्रथा र त्यसपछि दासप्रथा उन्मुलन गरिएको हुनुपर्दछ। त्यसबेलाको सरकारले घोषणामात्र गरेर, यसलाई दण्डनीयसमेत बनायो। छिटपुट घटनालाई आँखा नचिम्लिनाले नै केही बर्षभित्र सतिप्रथा लोप नै भयो भने दासप्रथा केही स्थान र जातबिषेशलाई अपवाद राखेर हरायो। त्यस्तो चेतनास्तर न्यून भएको समाजले कसरी यति सजिलै ‘आस्था’ छाडिदिए त? पक्कै दण्ड-जरिवानाको डरले। यस्तै डरले नेपालमा जुवा खेलिन्न थियो। जुवा फुकुवा हुने दिन कुर्न जनताहरू बाध्य थिए। पहिलाको के कुरा, ट्राफिक प्रहरीले चलाएको मापसेविरुद्धको अभियानले ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखाअगाडि छ। डर, जरिवाना, एक दिनको सास्तिः मादक पदार्थ खाएर वाहन चलाउनेलाई काम लाग्यो। नत्र के पहिला मापसे गरेर सवारी साधन चलाउन हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा थिएन र? सरकारले मलाई दण्ड दिन्छ भन्ने डर निकै कुरामा कारगार हुन्छ। हाल संस्थागत र व्यक्तिगत घोटालाहरूले अर्बको अंक नाघेर खर्बतिर लागेको कारण दण्डहीनता हो भन्नेमा सायद कसैमा द्विविधा नहोला। अनि बाटामा हर्न बजाए ट्राफिकले हजार रुपैँया तिराउँछ भन्ने डरले हर्नको कर्कस आवाज कम भएको पनि सबैलाई थाहै छ। भ्रष्टाचारमा डर रहेन, हर्न बजाउनमा डर रह्यो। जनचेतनाले भ्रष्टाचार हटेन, दण्डको डरले हर्न हट्यो।
कुनै जमानामा मेरी आमा मुढामा पर बसेर मलाई भान्सामा नुन-तेलको मात्रा बताउनुहुन्थ्यो। व्रतवन्ध नगर्दासम्म बासी भात खान र त्यसरी पर सर्नुभएकी आमालाई छुन छुट थियो। खाटमा नसुती तल भुइँमा गलैँचा वा राडी ओच्छ्याएर तीन रात बिताउनुहुन्थ्यो। ‘पर सर्दा’ के के गर्न हुन्छ र के के गर्न हुन्न भन्ने कुराहरू बुँदागत रुपमा आमाका दिमागमा थिए होलान्। आमा आफ्नै तथाकथित स्वधर्म पालन गर्न भात पकाउने, अचारको सिसी छुने, खाटमा बस्‍ने, पुजाआजामा जाने, मंदिर जाने र यस्तै केही कामहरू गर्नुहुन्नथ्यो। अँ! घरमै कुनै शुभकार्य हुँदा र दशैँ आउँदा केही गरी पर सर्नेबेला आउने भए हत्तपत्त परिवार नियोजनको चक्की खाइदिनु हुन्थ्यो। मन माफिक भनेजति दिन पर सर्ने कामलाई पर सार्दिनुहुन्थ्यो। सहरमा बस्‍ने हाम्री आमाहरूले प्रकृतिलाई जित्‍नुभएको थियो। यस्तै माहौलमा हामी हुर्किँदै गयौँ, बुझ्दै गयौँ र हामीले निरन्तर भनिरहँदा समयक्रममा उहाँले झट्टै नछाडे पनि दिमागका बुँदाहरूमा निरन्तर कमी आयो। अहिले घरमा कसैले बार्दैन, कसैलाई चासो पनि हुन्न कि को वर र को पर सरेको छ। पुजा कोठामा को को छिरेन भनेर चियो गर्न थाले केही पत्तो पाइन्थ्यो कि? खै! यो अंतिम बुँदा पनि मेरा परिवारका महिलाहरूको दिमागबाट हटिसकेजस्तो लाग्छ। बेसै भयो।
डा. रामेश कोइरालाको ब्लग मा जान याहा क्लिक गरौँ
Raamesh: छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?...:
छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?... Reviewed by Durga Pangeni on जुलाई 22, 2017 Rating: 5